केसीको अनसन र हामी « Loktantrapost
केसीको अनसन र हामी
१७ मंसिर २०७३, शुक्रबार ११:२९
चिकित्साशास्त्र अध्ययनका भित्री पाटाहरुमा भइरहेका विकृति विङ्सगतिविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी नवौँ पटक अनसनमा बसेका छन् । अनसनको तिन हप्ता बितिसक्दा पनि डा. केसीका माग पूरा गर्नतर्फ सरकार र सरोकारवालाहरुको ध्यान पुग्न सकेको देखिएन ।
नवौँपटक आमरण अनसनमा बसेका केसीका मागमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा देखिँदैनन् । उनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनसन बसेका होइनन् । निसन्तान डा. केसीले सबै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो परिवारको सदस्य सम्झेर तिनै आम नागरिकको पक्षमा उभिएर अनसन बसिरहेका छन् । नेपालको चिकित्साशास्त्र अध्ययनको फोहोरी खेलभित्रका खलपात्र हुन् डा. केसी । त्यसैले त्यहाँभित्रका भ्रष्ट र कमिसनखोरले डा.केसीलाई मार्ने डरलाग्दो षडयन्त्र गरिरहेका छन् र त्यो हतियार केसीले सुरु गरेको आमरण अनसनलाई नै बनाउने फोहोरी खेलमा लागेका छन् मेडिकल माफियाहरु । केसीले उठाएका माग सुशासनको पक्षमा र भ्रष्ट र कमिसनखोरको बिरुद्ध हो । आममानिसको स्वास्थ्यसँग सरोकारको विषय हो । हुनत केही मानिसका लागि केसी घाँडो नै भएका छन् । त्यसैले उनलाई मर्न छाड्दिनु पर्छ पनि भनेका छन् । केसी मरेछन् नै भनेपनि आन्दोलन रोकिँदैन । बरु केसीको आन्दोलनले अहिले केसीलाई बेवास्ता गर्नेहरुलाई बढार्नेछ । त्यस्तो अवस्था आए तीर्थ खनियाँ र केपी सिंह जस्ता पात्रहरु जमिनमुनि पनि सुरक्षित हुने छैनन् । केसीको आयतनको आँकलन सरोकारवालाले बुझे राम्रो हुन्छ । डा. केसीको लडाइँ प्रत्यक्ष रुपमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि तयार भएका विद्यार्थीहरुकोे पक्षमा छ अनि परोक्ष्यरुपमा आमनेपाली जनताको पक्षमा छ । तर, विद्यार्थी जगत आज अप्राकृतिक रुपमा मौन छ । के विद्यार्थी भनेका राजनीतिक दलका घुयँत्रो मात्र हुन् त ? दलका टाउकेले जता हुइँक्यायो त्यतै मात्र हुइँकिने ? कि विद्यार्थीलाई दलका नेताको आदेश बिना डा. केसी जस्ता महान् पुरुषका पक्षका सडकमा ओर्लन मिल्दैन ? अनि हाम्रा युवा जमात कता हराए यो बेला जसले देशका ससाना कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएर सरकारलाई गलत कदम उठाउनबाट रोक्ने काम गरिरहन्छ । आज किन युवा जमात एउटा दृढताका साथ मेडिकल माफियाबिरुद्धको लडाइँमा लडेको केसीको साहसको कदर गर्न हिचकिच्याई रहेको छ । सडकमा एउटा मान्छे घाइते हुँदा देश ठप्प पार्ने यो समाज आज किन देख्दैन डा केसीको अनसनलाई ।
कहाँ छन् नागरिक समाजका अगुवा ? के हो चेतना र बौद्धिकता ? कसले बाँधिदियो तिनका मुखमा मुखपट्टी ? किन भयो ‘बोल्तीबन्द’ ? कसले लगाइदियो तिनका आँखामा निश्पट्टताको कालो चस्मा ? किन देख्दैनन् आफ्नै अगाडि न्यायका लागि बर्षौँदेखि लडिरहेको एउटा जिउँदो मान्छे ? कता हराए मानवअधिकारको ट्याग भिरेका अधिकारकर्मीहरु ? के एउटा सच्चा देशभक्त चिकित्सकले बाँच्ने अधिकार राख्दैन यो देशमा ?
यो देशमा माग गर्ने सबैले प्राप्त गरेकै इतिहास छ । फेरि डा. केसीले के त्यस्तो माग गरे र आज उनका माग सम्बोधन गर्नु भन्दा उनलाई मार्न यो सरकार षडयन्त्र गरिरहेको छ ? नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा ६ प्रदेशमा सहमति भएको बेला मध्यपश्चिमको आन्दोलनले रातारात ७ प्रदेश बनाउन भ्याए, तराईमा विरोधका स्वर चर्किदै गर्दा ५ नम्बर प्रदेशका तराईका भूभागलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्न फेरि संविधान संशोधनले संसदमा प्रवेश पाएको छ । ठुला दललाई मन पर्दा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने र मन नपर्दा तिनै दलले महाअभियोग लगाएर निकाल्ने गर्न पनि रातारात तयार हुने तर डा. गोविन्द केसीको मागमा किन सरकार र ठुला भनिएका दलहरु उदासीन ? यसभित्रको घिनलाग्दो खेल के हो आम नागरिकले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? अनि यी सबै घटनालाई टुलुटुलु हेरिरहने आम जनता चाँहि कसको आदेश पर्खेर बसेको छ डा. केसीको पक्षमा उभिन ? अब पनि केसीको माग पूरा भएन भने र उनको जीवन समाप्त भयो भने त्यसको दोष सबै नेपाली नागरिकले लिनु पर्छ । कुनै सरोकार नै नभएको विषयमा रगत बगाउन तयार हामी आज किन डा. केसीका पक्षमा सडक भर्न निस्कन सक्दैनौँ ?
राजनीतिको फोहोरी खेलको शिकार नबनाइयोस् डा. केसीलाई । यतिबेला डा केसी जस्ता महान् आत्माहरुको पक्षमा उभिन सकिएन भने भविष्यमा पछुताउनुको कुनै अर्थ छैन । फेसबुक र टुइटरका भित्तामा मात्र केसीको पक्षमा छु भनेर लेखेर मात्र अब केही हुनेवाला छैन । अब त वास्तविक रुपमा उनको पक्षमा उभिने बेला आएको छ ।
हामीले सामाजिक सञ्जालमा आई एम वीथ डा केसी लेख्दै गर्दा डा केसी लास भए भने दोष तपाईंमा आउने छ । डा. केसीको लासमाथि रुनुभन्दा उनले उठाएका जायज मागका बारेमा सरकारलाई दबाव दिएर उनको जीवन रक्षा गर्नु बुद्धिमता हुनेछ । त्यसैले बेला आएको छ, एउटा जबरजस्त सङ्घर्षको । जनताको सङ्घर्षबाट राजा फालेको हाम्रो इतिहासलाई सम्झौँ र जागौँ । आजैबाट उठौँ । आजैबाट र उत्रिऔँ आजैबाट डा केसीको जीवन बचाउन अनि उनका जायज माग पूरा गराउन ।